မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို သင့်ရဲ့ အချစ်တွေ ခံစားမိစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၅) ချက်
Home Child Care မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို သင့်ရဲ့ အချစ်တွေ ခံစားမိစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၅) ချက်
ကလေးတွေကို မေမေတို့ရဲ့ အချစ်တွေကို ခံစားရစေနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ခံစားချက်တွေကို ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၁။ ကလေးနဲ့ မျက်လုံးချင်ဆုံပါ
ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ တစ်ခုခုလုပ်ရင်း၊ အစာစားရင်းနဲ့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်တစ်ခါကလေးတွေနဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးချင်းဆက်သွယ်ပြီး ပြောပါ။ သင့်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ကလေးကို မျှဝေခြင်းဟာ ကလေးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေအပြန်အလှန်မေးပါ။ သင်လုံးဝမအားဘူးဆိုရင် လုံးဝမအားကြောင်းပြောပါ။ ပြီးမှ စကားသေသေချာချာပြောပါ။
မေမေတို့ကလေးနှင့် အတူနေချိန်ဟာ ‘၁၀’မိနစ်လေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် ကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးနိုင်ပါစေ။ ဖုန်းပိတ်ထားပါ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားအခန်းမှာ ထားခဲ့ပါ။ သို့မှသာ ကလေးနဲ့ ကောင်းကောင်းအချိန်ဖြုန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မေးခွန်းတွေကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပါ
ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုလဲ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေရဲ့လား? စကားဝိုင်းတွေမှာ သင့်ကို ကြည့်ပြီး မေးပါ။ သူတို့ဘဝမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မျှဝေပေးနိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေကို မေးပါ။ ဘယ်အရာတွေက သူတို့အကြိုက်ဆုံးအရာတွေ၊ မကြိုက်ဆုံးအရာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ မေးပါ။ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အစဉ်အလာတွေဖန်တီးပါ။ အသေးစိတ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ နံနက်စာအတူစားပါ။ ကလေးသဘောကျတတ်တဲ့ အားကစားပွဲတွေရဲ့ ရက်စွဲတွေကိုမှတ်ထားပါ။
နမ်းခြင်း၊ အိပ်ရာမဝင်ခင် ပွေ့ဖက်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကို ပြခြင်းဖြင့် ကလေးတွေအတွက် ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ရဲ့ အထူးနှုတ်ဆက်နည်းတစ်မျိုးဖန်တီးပါ။
၅။ သူတို့ချစ်တဲ့အရာတွေကို လိုက်ချစ်ပါ
သေချာတာပေါ့။ သင်ဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ကစားစရာတွေကို သင်စိတ်ဝင်စားချင်မှ စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ သို့ပေမယ့် သင့်ကလေးတွေချစ်တဲ့အရာတွေကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းက သူတို့ဟာ သင့်အတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စွန့်စားခန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း ပြောပြရင်း သူတို့ရဲ့ ဝါသနာတွေကို မြှင့်တင်ဖို့ သင်ကိုယ်တိုင်ကူညီပေးပါ။
Previous articleတကိုယ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့ ကလေးတယောက်ဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ?
Next articleကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်(၃)ချက်